Ka hel Dib-u-eegis Bilaash ah Blog-kaaga ama Boggaaga | Martech Zone
Ka hel Dib-u-eegis Bilaash ah Blog-kaaga ama Boggaaga
Talaado, September 7, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaad dadaal badan galisay goobtaada ganacsiga ama blog shirkadeed, waxaa la joogaa waqtigii la hagaajin lahaa. Waxaan uqornay Blogging Corporate for Dummies si aan uga caawino ganacsiyada inay ka faa'iideystaan ​​balooggsiga si ay u dhisaan maamul ayna u helaan hoggaan khadka tooska ah. In kasta oo buuggu ku urursan yahay baraha wax lagu qoro iyo aaladaha wax lagu qoro, haddana aragtiyaha ayaa loo fidiyaa degel websaydh ah illaa laga helayo bogga soo degitaanka ee lacag-gujinta ah.
Inbadan oo idinka mid ah durba waxay bilaabeen aqrinta buugga ra'yiururintuna waa mid farxad gelinaysa. Waan ogayn inaan haysanno iibiyaha ugu fiican - laakiin ma aanan ogeyn sida weyn ee buugga loo heli doono. Qaar ka mid ah dadka waaweyni waxay si shaqsi ah u qoreen oo ay noo sii sheegaan in taraafikada iyo beddelaadooduba ay horey ugu sii jireen bartooda toddobaadyo gudahood markii ay dejinayaan xeeladaha qaar. Cajiib!
Waxa aanan u arkin ilaa heerkaan, in kastoo, dib u eegis lagu sameynayo Amazon, Xuduudaha, Barnes iyo Noble, Waxyaabaha loo yaqaan 'Goodreads', Shelfari, Iyo Glue.
Haddii aad buugga dib ugu eegto khadka tooska ah, waxaan dib u eegis ku samayn doonnaa boggaaga ama balooggaaga waxaanan ku siin doonnaa xoogaa jawaab celin wax ku ool ah oo ku saabsan naqshadeynta, ku habboonaanta mashiinka wax lagu raadiyo, isku beddelka ku habboon iyo guud ahaan saameynta Xitaa waan sameyn doonaa ku qor boostada una sharax akhristayaasha waxa ay tahay inaad qabato. Waxaan tan ku samayn jirnay bartan oo waxaan ugu magac darnay "Blog Tipping"… waxayna ka sameeyeen qoraalo waaweyn!
Xeerka kaliya ayaa ah adiga waa inuu akhriyaa Shirkad-qorista Shirkadaha Dummies waana inaad soo dirtaa xiriirka dib u eegista faallooyinka qoraalkan. Markaad sameyso, waan bilaabi doonnaa. Haddii aad xoogaa shaqo ah galisid dib-u-eegidaada, waxaan xoogaa shaqo ah kuu geyn doonaa kaaga!
Tags: daruur Kombuyuutaradataariikhdafalanqaynta sanduuqamuuqaalka moobiilkanoqoshada wadada kaleqabiilooyinka
Drip, Drip, Drip… Iibso
Baraha Bulshada + Falanqaynta = Khaldan
Sep 11, 2010 at 1: 34 PM
Haye ragga, aad baan kuugu arkaa Blog Indiana waadna ku mahadsan tahay inaad ii keentay Vitamin Water. Hadda waxaan galayaa buugga, waana wax walba oo ay ballanqaaday inay noqon doonto.